Shirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay
Shirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay
September 6, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweynaha DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo shir guddoominaya madasha oo si rasmiya maanta u furmay. Sawirka: Daud Aweys.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka madasha sare ee hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah si rasmiya uga furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxda dowlada federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Ajandaha shirka ayaa gabi ahaanba ku saabsan hanaanka doorashooyinka dib u dhacay ee la filayo in bisha Oktoobar ee dabayaaqada sanadkan ay dhacaan.
Khuburada falaanqeeya siyaasada Soomaaliya ayaa sheegaya in ay macquul noqon karto in wakhtiga doorashooyinka ay mar kale dib u dhacaan, marka la fiiriyo qaabka diyaargarowga.
Beesha Caalamka ayaa sheegtay in ay bixinayso 60 boqolkiiba dhaaalaha ku baxaya doorashooyinka halka 40 kale laga rabo in ay bixiyaan maamulada iyo dowlada dhexe.
Sida ay khuburada sheegayaan waxaa macquul ah in shirkan looga hadlo qorshayaal horey loo degsaday balse aan muuqan in ay qabsoomaan, marka la fiiriyo dhaqaalaha iyo wakhtiga yar ee harsan.
Shirkan ayaa la filayaa in uu si dhaqso ah u soo gabagaboobo iyadoo tobonka bishaan uu Muqdisho ka furmayo shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo muddo 25-sanno kadib markii ugu horeysay lagu qabanayo halkaas.
August 3, 2016 Shirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaalida oo Muqdisho ka furmay
Madaxweyne Obama oo joojiyay kulan uu la yeelan lahaa madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte kadib markii Madaxweynaha Filibiin ku tilmaamay Obama ‘wiilkii sharmuutada’
Diyaarad sida qaadka Miirowga oo timid magaalooyinka Puntland iyadoo dowlada federaalka hakisay qaadka Mirowga ee Kenya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa shaqada ka ceyrshay todobo sargaal oo katirsan ciidamada Daraawiishta, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxtooyada. Bayaanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha ay ku xadgudbeen anshaxa ciidamada Puntland. Magacyada [...]
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo gaaray magaalada Baydhabo
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed si uu uga qaybgalo shirka madasha qaran. Waxaa madaxweynaha garoonka diyaaradaha si heer saraysa ugu [...]